Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Ukuhamba kweshishini kubonwa njenge-perk kwi-post-COVID US
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Abasebenzi banemveliso kwaye abanaxinzelelo xa besiya kushishino. Yikota (25%) kuphela abathi baziva benoxinzelelo xa besebenza kuhambo loshishino, nge-32% besithi abaziva bengahlukanga kwaye i-43% eseleyo baziva benoxinzelelo oluncinci xa besebenza ngelixa behamba.
Ngaphezulu kwesithathu sabasebenzi baseMelika bathi ezona zimvo zilungileyo zeshishini zenzeka xa behamba ngeshishini.
Kuphela ngama-26% abasebenzi base-US abacinga ukuba iintlanganiso zobuso ngobuso zifile.
I-74% yabasebenzi base-US bacinga ukuba uhambo lweshishini kunye neentlanganiso zabantu ziyafuneka kwikamva leshishini.
Ngaphezulu kwesiqingatha (i-53%) sabasebenzi base-US bacinga ukuba ishishini labo lifuna iintlanganiso ngaphakathi kwabo ukuze baphile, isifundo esitsha sifumene.
Uvavanyo lwabasebenzi abali-1,000 26 baseMelika baphande indlela abebejonga ngayo iintlanganiso zomsebenzi kunye nohambo loshishino. Iveze ukuba yi-74% kuphela yabasebenzi abacinga ukuba iintlanganiso ubuso ngobuso zifile, kunye ne-XNUMX% eseleyo yokukholelwa ezintlanganisweni nabantu ingundoqo kwikamva leshishini.
Ngaphezulu kwesiqingatha (iipesenti ezingama-53) bathi kulula ukuthembela kwintengiso yomntu ngaphakathi kwi-Intanethi, nge-64% ethe isitshixo sokuthemba kukunxibelelana nabantu. Kanye nokwanda kokuthembana xa uhlangana nomntu, isaveyi ibonakalise indlela ukuya kwiintlanganiso zabantu ngaphakathi kunemveliso ngakumbi- 60% ye US Abasebenzi bathi benza amalungiselelo angakumbi eeentlanganiso zabantu kunokuba besenza kwiintlanganiso.
Olu phononongo lujonge kwizimo zengqondo ngokubanzi uhambo loshishino, Ukufumanisa ukuba uninzi lwabasebenzi banomdla wokubuyela kuhambo lomsebenzi. I-41% ithe babona ukuhamba kweshishini njengeyona nto ibalulekileyo ukusukela ngobhubhani, nge-40% besithi uhambo lweshishini luya kubaluleka kubo xa befuna umsebenzi omtsha. Icacisile indlela izizukulwana ezincinci ezikulangazelela ngayo ukuhamba ngeshishini, ngaphezulu kwesiqingatha (54%) sabantwana abaneminyaka eli-16 ukuya kwengama-24 besithi ukuhamba kweshishini yeyona nto ibalulekileyo ukusukela kubhubhane, xa kuthelekiswa ne-13% ngaphezulu kwe-55s. Kananjalo nokufuna amava angakumbi omntu, izizukulwana ezisencinci zifumana ukhuthazo ngakumbi. Ngaphezulu kwesiqingatha (53%) sikaGen Z bathi ezona zimvo zintle zeshishini ziyenzeka xa useluhambeni, xa kuthelekiswa naphantsi kwesihlanu (18%) ngaphezulu kwama-55s.
Olu phononongo lukwajongise kwimikhwa yokwandisa, ibalaselisa into abantu abaziva bekhululekile ukuyenza xa besiya emsebenzini. Kufumanise ukuba abantu bakonwaba kakhulu xa behambisa ukutya, iipesenti ezingama-83 zisithi bazokubuyela kwisidlo kwindawo yokutyela. Oku kuyehla xa kujongwa kwinkonzo yasekamelweni, kuphela yi-57% yokuziva ukhululekile ukuhambisa into abebeyalele kwigumbi labo. Ngaphezulu kwekota yabasebenzi (iipesenti ezingama-26) banokuziva bekhululekile ukuhambisa utywala bebodwa, amadoda enethezekile kunabafazi (16% vs 8%) kunye noGen Z kunye nemillennials bekhululeke ngakumbi kunama-55s (36% vs 9%).
Ukutya kuhlala kungaphezulu kuluhlu xa ujonga izinto eziphambili kubasebenzi xa useluhambeni. Ama-72% afuna ukuphuma aye kutya isidlo sangokuhlwa ngexesha lohambo lweshishini, kunye ne-69% efuna ukuhlala kwihotele entle kwaye ngaphezulu kwesiqingatha (55%) befuna ukutyelela iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi. Ukutyelela indawo yokuzivocavoca umzimba akuthandwa kangako (iipesenti ezingama-24), ngelixa ngaphezulu kwesithathu (39%) befuna ukuya kuphuma ebusuku xa usiya kushishino. Ukuhlalutya amashishini, kwafunyaniswa ukuba i-HR zezona zilwanyana zinkulu zepati, nge-56% isithi ukuphuma ebusuku yeyona nto iphambili xa undwendwela kwenye indawo kwishishini.
Emva konyaka usebenza kude kwaye udityanisiwe, kuye kwakho iingxoxo malunga nokuba ikhaya okanye iofisi yeyona iluncedo kakhulu kubasebenzi. Zininzi US Abasebenzi besithi uhambo loshishino yeyona perk ngoku kunakuqala. Ngapha koko, iipesenti ezingama-34 bathi banezimvo zabo ezilungileyo zeshishini xa besiya emsebenzini, bebonisa indlela ekukhuthaza ngayo ukuphuma emhlabeni kunye nokudibana nabantu onxibelelana nabo emsebenzini.
Ngelixa ubuchule bokukwazi ukutsiba kwifowuni ye-Zoom yeentlanganiso ezingabalulekanga kangako zinokuthi kwaye kufuneka zamkelwe, zihlala zezona zimvo zibalaseleyo, ubudlelwane obulungileyo- kunye nezona ziphumo zilungileyo- zenzeka xa abantu behamba bedibana ubuso ngobuso.